आफै पिडामा छ शिक्षण अस्पताल, निजीमा रेफर गर्ने थलो बन्दै (खोजी) - LaltinKhabar
आफै पिडामा छ शिक्षण अस्पताल, निजीमा रेफर गर्ने थलो बन्दै (खोजी)
विरामीको वेहाल, दैनिक १० जना रेफर !
मितीः २०७५ माघ २९
समय: विहान १०ः७
स्थानः त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज
अस्पतालको गेटभित्र छिर्दा विरामीहरु डाक्टरको पर्खाइमा देखिन्छन् । आफन्तहरु निराश जस्ता देखिन्छन् । हस्याङफस्याङ गर्दै डक्टरको खोजी गरिरहेका छन् । तर अधिकांश डक्टरहरु विरामीको उपचारका लागि समयमा नै आएको देखिदैन् । केहि वेडमा विरामीहरु छटपटिरहेका छन् तर, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुको ध्यान छटपटिरहेको विरामीमा खासै पर्न सकेको देखिदैन् ।
विरामीहरु प्रति न त अस्पताल प्रशासनले वास्ता गरेको देखियो न त डाक्टरहरुले नै । अस्पतालका डक्टर र कर्मचारीहरुमा सेवाको भावना भन्दा जागिर खाने र समय कटाउनेमा नै केन्द्रित देखिन्छन् ।
काठमाडौंका ८१ वर्षिया रमिता श्रेष्ठलाई एक्कासी छाति दुख्ने समस्या भएपछि आइतबार बेलुकी सो अस्पतालमा भर्ना गरीयो । उनका आफन्त समित श्रेष्ठले भने, ‘के गर्नु इमरजेन्सीमा ल्याइयो । भर्ना गर्नुपर्ने भनेका छन् डाक्टरले । अस्पतालले अन्यत्रै रिफर गर्नुस भर्ना गर्ने ठाउँ छैन भनेका छन् । खोइ तनावमा छु हेर्नुस ।’
काठमाडौं वसुन्धाराकी ६१ वर्षीय लक्ष्मी दाहाल बिहान १० बजेर आठ मिनेटमा अस्पताल पुग्छीन् । उनको खुट्टा निकै सुन्निएको छ । श्रीमान् अच्युतप्रसाद दाहाल एकछिन कहाँ जाने कसरी सेवा लिने भन्नेमै अलमलिन्छन् । लगत्तै हाडजोर्नि ओपीडी अर्थात् (ए–फाइभ) मा पुग्छन् । दाहालले डाक्टरलाई पर्चा दिन खोज्दा डाक्टर झर्किन्छन् । मलाइ दिने होइन उ ? उहाँलाइ दिनुस भन्ने जबाफ फर्काउँछन् । यताउता भौतारीएपछि आधा खण्टा अर्थात् १०ः३७ मा लक्ष्मीको पालो आउँछ । अस्पतालमा डाक्टरहरुको नाम समेत टाँसीएको देखिदैंन । डाक्टरले लक्ष्मीलाई एक्सरे गर्न भन्छन् । उनका श्रीमान् एक्सरेका लागि हिमालय वैकंमा पैंसा तिर्ने लाइन लाग्छन् । उनको पालो सात जनापछि आउँछ । त्यसपछि उनी एक्सरेको रिपोर्ट लिएर श्रीमति सहित सवा १२ बजे डाक्टर कहाँ पुग्छन् । लक्ष्मीले डाक्टरसंग भनिन् , ‘पाँच दिन भयो खुट्टा असाध्यै दुखेको छ । वस्न, उठ्न समेत अफ्ठेरो हुन्छ ।’ तर, डाक्टरहरु उनको उपचारमा संबेननशीलता नदेखिएर फोनमा व्यस्त देखिन्छन् । अन्ततः उनी सवै प्रकृया पुरा गरेर तीन घण्टा पछि अस्पतालको गेटबाट बाहीर जान्छन् ।
तनहुँकी ४० वर्षिया रसीता मिया मृगौलामा समस्या भएपछि अस्पतालमा फलोअपका लागि विहान ९ बजे पुगीन् । उनले भनीन्, ‘अहिले सवा १२ बजीसक्यो, पालो नै आएन हेर्नुस त ? डाक्टरहरु पनि हुनुहुन्न । वार्डमा जानुभएको छ रे । ’
विरामी लिएर आएका मदन रावतले भने, ‘कसैले कसैलाई वास्ता गर्दैनन् । झोक्कीन्छन् मात्रै । ’ उपचारका लागि बिरामीहरु अस्पतालमा पुग्दा समेत डाक्टरहरु समयमा सम्बन्धीत ओपीडीमा नभेटिने गरेको पाइएको छ । जसकारण बिरामीहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
हाल सो अस्पतालमा दुइ सय २ डाक्टरहरु कार्यरत छन् । कर्मचारी प्रशासन शाखाले डाक्टरहरुको डियूटी तालिका राखेको छैन । वार्ड वार्डहरुबाट मात्रै जानकारी हुने सो शाखाले जनाएको छ ।
इमरजेन्सी वार्डमा आउने बिरामीहरुलाई रिफर गर्ने गरीएको छ । भर्नाका लागि पर्याप्त बेड नहुँदा इमरजेन्सीमा आएका बिरामीहरु दैनिक रिफर हुने गरेका छन् ।
दैनीक आठदेखि १० जना बिरामीहरु रिफर हुने गरेको इमरजेन्सी वार्डले जनाएको छ । वार्डका प्रमुख डा. योगेन्द्रमान शाक्यका अनुसार इमरजेन्सीमा ६० वटा बेडहरु छन् । उनले भने, ‘दैनिक एक सय ३० जनासम्मको संख्याका बिरामीहरु इमरजेन्सी कक्षमा आउनुहुन्छ । करीव ६ सय वेड छन् । एक हजार दुइ सय वेड अझै आबश्यक छ । ’ जनसंख्या बढ्दै गएपनि बेडको संख्या नबढाउँदा बिरामीहरुलाई रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताइएको छ ।
हाल शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुने कतिपय विरामीलाई नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मोडेल कलेज, पाटन मेडिकल कलेज र किष्ट मेडिकल कलेजमा पठाइदैं आएको छ ।